IPad Pro leh kamarad seddexaad ayaa imaan kara deyrta | Wararka IPhone
IPad Pro oo leh kamarad seddexaad ayaa imaan kara deyrta
Wax badan ayaa laga sheegayaa iPhone-ka soo socda iyo kamaradiisa seddex-geesoodka ah, laakiin deyrtan sidoo kale waxay u badan tahay inay u badan tahay in ipad-yada cusub la sii deyn doono, qaar ka mid ah ayaa sidoo kale ku jiri kara kamaradda cusub ee saddexda ah ee iPhone 11. Sida ku cad wararka xanta ah ee toos uga imanaya Japan, iPad Pro-ka cusub ee imanaya dayrta waxaa ku jiri kara isla kamaradan.
IPad Pro oo leh muraayad seddex geesle ah iyo isku qaab saddexagal leh iyo laba cabbir shaashad, sida kuwa hadda jira, iyo 10,2 cusub oo iPad ah oo leh laba kamaradood, sida midka hadda ku jira iPhone XS iyo XS Max. Xanta ayaa si toos ah uga timaada Mac Otakara, oo ah ilo leh taariikh lagu kalsoonaan karo.
Apple ayaa ugu dambayntii si dhab ah uga feejignaan karta kamaradda iPad-ka, oo ah aalad had iyo jeer ka dambaysa iPhone xilligan, taasna waxaa caddeyn u ah Waxaan la soconay kamarad labajibbaaran iPhone-ka muddo haatan laga joogo labo sano, laakiin iPad-ka ayaa wali leh hal muraayadXitaa moodelkeeda ugu qaalisan, iPad Pro. Xaqiiqdii, illaa dhowaan, iPad-yada xitaa ma lahan flash kamarad.
IPadyadan cusubi waxay imaan doonaan xagaaga kadib, laga yaabee inay ku soo beegmeen markii la bilaabay iPhone 11 ee saddexda nooc ee laga filayo. Laba iPad Pro oo cusub oo aan lahayn naqshad naqshadeyn weyn marka laga reebo kamaradda seddexaad ee aan soo sheegnay, iyo joogtaynta isla cabirka shaashadda labadeeda nooc. Kuwaas waa inaan ku darnaa iPad cusub oo leh shaashad 10,2 ah oo aan horey uga soo hadalnay horay, taasna ay imaaneyso inay beddesho iPad-ka 2018 kaas oo la bilaabay sanad iyo badh ka hor, iyada oo aan dib loo cusboonaysiin tan iyo wakhtigaas. Waxyaabihii ugu dambeeyay ee sannadkan soo kordha waxay ka imaan doonaan laptop-ka Apple, oo wata MacBook Pro cusub oo leh shaashad 16 ah iyo qaab aan qaab lahayn. Waa inaan sugnaa ilaa xagaaga laga gudbo si loo xaqiijiyo wararkaas xanta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » iPad Pro » IPad Pro oo leh kamarad seddexaad ayaa imaan kara deyrta
Apple waxay ku dhiirrigelinaysaa macaamiishii hore ee Apple Music inay ku soo noqdaan adeegga